Ny taranaka faharoa an'ny TAG Heuer Connected, dia aseho amin'ny 14 martsa | Vaovao momba ny gadget
Ny taranaka faharoa an'ny TAG Heuer Connected, natomboka tamin'ny 14 martsa
Na eo aza ny zava-misy fa mihabetsaka ny mpamokatra no mieritreritra azy mihoatra ny indray mandeha rehefa mampiasa vola amin'ny smartwtaches vaovao, misy ny mpanamboatra sasany izay toa mandeha tsara kokoa noho izay eritreretintsika. Anisan'ireny i TAG Heuer, mpamokatra famantaranandro malaza any Suisse. Ity mpanamboatra ity dia nanambara iray volana lasa izay fa miasa amin'ny taranaka faharoa amin'ny TAG Heuer Connected, fitaovana iray izay Manana ny vidin'ny tsena 1.350 euro izy ary amidy 20.000 XNUMX mahery ireo, fahombiazana ho an'ny orinasa mandinika ny vidiny, vidiny izay afa-miala amin'ny tanana maro.
14 martsa, mijanona tsy tapaka… #Connected To Eternity pic.twitter.com/ioLH1DdcO7
Saingy tsy ny orinasa mpiambina ihany no nametraka lohany tamin'ity sehatra ity. Ny fosily dia efa manana modely marobe eo amin'ny tsena Movado dia hanao izany amin'ny fararano manaraka, miaraka amin'i Tommy Hilfiger sy Hugo Boss, na dia niditra tao amin'ny tontolon'ny smartwathes aza izy roa ireto taorian'ny nandreseny tamin'ny tontolon'ny lamaody, miaraka amin'ny fitaovana normalista izay tsy miseho na aiza na aiza ny rendrarendra.
Ny orinasa soisa dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny bitsika iray fa Amin'ny 14 martsa, hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny taranaka faharoa amin'ny TAG Heuer Connected, fa tsy toy ny voalohany, ny taranaka faharoa dia hatao hoe TAG Connected Modular. Araka ny tondroin'ny anarany, ny TAG Connected Modular dia hanolotra spheres azo ovaina, ary koa fehy sy fametahana samy hafa.
Hamely ny tsena amin'ny Android Wear 2.0 amin'ny volana Mey io. Ny taranaka voalohany an'ny smartwatch TAG Heuer dia havaozina ihany koa ao anatin'ny herinandro vitsivitsy amin'ny Android Android versi faharoa, hanararaotra ny vaovao rehetra izay tonga avy amin'ny rafitra fiasan'i Google ho an'ny smartwtaches.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Ny taranaka faharoa an'ny TAG Heuer Connected, natomboka tamin'ny 14 martsa
Seza Maria Carmen Almerich dia hoy izy:
Valiny tamin'i Maria Carmen Almerich Silla
Ny Moto G5 sy G5 Plus dia azo tehirizina any Eropa ankehitriny